Daldala - BBC News Afaan Oromoo
Kalaqxoota BBC: 'Kun dhuguma Ijaajjiitti hojjetamaa?'
Seensa Magaalaa Ijaajjiitti suuqiin xiqqoo tokko, kan kopheen gurguddaa, haarawaafi akaakuu adda addaa toora galee fannifamee jiru argine. Itti gorree odeeffanne.
Kitaabni waa'ee Obbo Ermiyaas Amalgaa barraa'e maal hima?
Jalqaba torban kanaatti kitaabni mata duree 'Yemaayisabarawu' jedhamuun barraa'ee fi waa'ee seenaa jireenya Ermiyaas Amalgaa himu tokko eebbifameera. Obbo Erimiyaas biyyaa bahuu fi deebi'ee hidhamu isaatiin kan adda cite ture kitaabni kun barraa'ee xumuramuuf waggaa torba fudhate.
Mootummaan Itoophiyaa baankiin Islaamaa qofaatti dhala irraa bilisa ta'e akka hundaa'u dhihoo eeyyameera. Garuu, faayidaan isaa maali? Akkamin hojjeta kan jedhu namoota beekan gaafanneerra.
Dhaabbata hojjetaa 900 qabuu garuu waajjira hin qabne
Dhaabonni waajjira qabaachu dhiisuu jabeessaa jiran hojjettootaaf gaariimoo hamaadha?
8 Adooleessa 2019
Barruun maqaa dureeyyota addunyaa taresseeuun beekamu dubartoota Amerikaa 80 ta'an ofiin qabeenya horataniifi industirii gara garaa keessa jiran ifa godheera.
Dureessa gibira paawundii 35.20 qofa kaffale
Daldalaa dureessi Firaank Timis gibira osoo hin kaffaliin yeroo dheeraaf turuu isaa qorannoon BBC ragaan argate.
Uggura beeksisa dhugaatii alkooliifi yaaddoo ogeeyyii miidiyaa
Ministeera Fayyaatti bulchiinsi nyaataa fi qorichaa labsii haaraa dhugaatiiwwan alkoolii karaa Raadiyoo, TV fi barjaalee akka hin beeksifame dhorku hojiirra olchu eegaleera.
31 Caamsaa 2019
Warshaa Sukkaaraa Wanjii: Omishitoonni shankooraa bittaan warshaa nuuf mala jedhu
Lafa warshaan sukkara wanjii irra qubatee fi shankoora itti omishu hektaara 5,000 kanarraa Oromootu buqqa'e waan ta'eef bittaan warshichaa nu ilaalatta jedhu omishtoonni shonkooraa naannichaa.
24 Caamsaa 2019
Tolchaa Maammoo: 'Killee saantima 20'n daldala eegale'
Killee saantima 20 bitee gurguruunan daldala eegale jedhu Obbo Tolchaan. Wayita ammaa Naayiroobii keessatti mana nyaataa gurguddaa lama qabu.
Ministeera Galiiwwanii keessatti hooggansa naannolee biyyattii bakka bu'ee jiru ilaalchisee loogiitu jira jechuun tibbana komiin ka'aa tureera. Aadde Adaanach ''Inumaa Oromiyaa keessatti itti aantonni saboota biroodha,'' jedhu.
10 Caamsaa 2019
Kampaanonni PVH jedhamu mirga hojjettootaa sarbaa jiraachuun dhagahame. Hojjettoonni Paarkii Indastirii Hawaasaa keessa jiranis komii akkanaa qabu. Hoggantoonni garuu komii ka'u haalaniiru.
Dargaggoo Abarraa Dachaasaa: ''Dargaggeessi simintoo jiidhaa boca barbaadetti ofsirreessuu danda'uudha''
Dargaggoonni waggoota muraasa keessatti hojii isaatiin guddina mul'ate argamsiisee kunis attamiin akka guddate gaafatamee 'hojii galii argamsiisu kamu tuffadhee bira hindarbuu' jechuun deebiiseera. Gutummaa turtii keessummaa keenyaa dubbifadhaa.
5 Ebla 2019
Imala BBC Afaan Oromoo: Jimaan osoo dhabamee warri Awwadaay maal tahu?
Awwadaay, bakka jimaan waa hunda, wanti hundis jimaa itti ta'e
14 Bitooteessa 2019
'Haadha koo jalaa Yuuroo 30,000 hateen miliyoonara ta'e'
Andiriiw Misheel wayita umriinsaa ganna 17 kaardii maallaqa haatisaa ittiin olkaawwattu dhoksee fayyadamuun, dhaabbata teeknooloojii ittiin hundeesse.
'Hidhaa bahuu Sheeh Mohaammad al-Amuudiif MM Abiy gahee olaanaa qabu'
Sheeh Mohaammad Huseen al-Amuudii hidhaa ji'oota kudha afuriin booda gadiifamaniiru.
Mohammad Deewijii: Dargaggeessi sooressa Afriikaa ta'e Taanzaaniyaa keessatti ukkafame
Mohhamad Deewijii mana gymii hoteela ISwaankii seenuuf utuu jedhuu hidhattoota fuula isaanii hagguugataniin ukkafame, jedha poolisiin.
25 Fuulbaana 2018
Jaarmiyaalee diinagdee addunyaa fi Itiyoophiyaa - 'Pizaa Haat'
Jaarmiyaan idil-addunyaa Ameerikaa Piizaa Haat jedhamu fuula gara Itiyoophiyaatti garagalfateera. Jaarmiyaan kun Finfinneetti damee banuunsaa mootummaan gabaa addunyaaf balbala banuusaa agarsiisaa laata?
11 Ebla 2018
Dhuguma waliigalteen daldala daangaa malee Afriikaa Itoophiyaaf bu'aa qabaataa?
Waliigalteen daldala daangaa malee biyyoota afriikaatiin mallattaa'e, jireenya namoota miliyoonotaa ni foyyeessa jedhameeti abdatameera.